चायाबाट छुटकारा पाउन अपनाउनुस् यी घरेलु उपाय - NepaliEkta
मृतक टेकबहादु केसीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली
विश्वभरबाट शर्मिष्ठा चौधरीप्रति श्रद्धाञ्जली : सिंह
मानव समाजको इतिहास र वर्तमान
माइक्रोसफ्टका अध्यक्षमा भारतीय मूलका नाडेला नियुक्त
चायाबाट छुटकारा पाउन अपनाउनुस् यी घरेलु उपाय
3 June 2021 Nepaliekta	0 Comments
87 जनाले पढ्नु भयो ।
गर्मी महिनामा कपालको विशेष ख्याल राख्नु निकै जरुरी हुन्छ । यो मौसममा कपालमा धेरै समस्या देखिन्छ । तर केही त्यस्ता साधारण उपायहरु छन्, जसले कपाललाई चमकदार र मजबुत बनाउन अनि कपाल झर्ने र चायाको समस्याबाट टाढा रहनका लागि तपाईलाई सघाउनेछ ।
यो हामी सबैलाई थाहा छ कि नरिवलको तेल शिरको छालाका लागि निकै राम्रो हुन्छ । यसले कपालमा पनि सबै प्रकारका इन्फेक्सन र चाया समाप्त गर्छ । नुहाउनुभन्दा एक रात पहिले नरिवलको तेलले टाउको र कपामा राम्रोसँग मसाज गर्नुस् ।
एलोभेरा अर्थात ध्यु कुमारीले पनि चायाको समस्याबाट राहत दिनसक्छ । यसमा रहेका प्रचुर गुणहरुले कपाल र छालालाई पनि धेरै फाइदा पु&yen;याउँछन् । यसले छालालाई सुख्खा हुनबाट पनि बचाउँछ । आफ्नो तालुमा एलोभेरा जेल लगाउनुस् र १५ मिनेट सुकाउनुस्, अनि फेरि पानीले धुनुस् ।
हाम्रो तालुलाई शुष्कताबाट बचाउन दहील्े पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्छ । यसका लागि आफ्नो शिरमा ३० मिनेटसम्म दही लगाएर राख्नुुस् र फेरि शिरलाई धुनुस् । दीका कारण हामीलाई चायाबाट मुक्ती मिल्छ । राम्रो परिणामका लागि तपाईले दहीमा तेल मिलाएर पनि शिर र कपालमा लगाउन सक्नुहुन्छ ।
एप्पल साइडर भिनेगर
एप्पल साइडर भिनेगर तालु चिलाउने समस्याबाट मुक्ति पाउनका लागि राम्रो विकल्प हो । एक चम्चा भिनेगरमा चार चम्चा पानी मिसाउनुस् । त्यसपछि कपासको सहयोगले त्यसलाई तालुमा लगाउनुस् । झन्डै आधा घण्टासम्म त्यसलाई तालुमै रहन दिनुस् र कपाललाई हल्का स्याम्पुले धुनुस् ।
← गण्डकी प्रदेश सांसद कृष्ण थापा पदमुक्त
बन्दाबन्दीमा छाक टार्न समस्या भयो ? ११८० मा सम्पर्क गर्नुस् →
पाचन प्रणाली कसरी राम्रो बनाउने ?
23 July 2020 Nepaliekta 0
13 June 2021 13 June 2021 Nepaliekta 0
बढ्दो आत्महत्या : जटिल समस्या
26 September 2020 12 October 2020 Nepaliekta 0